ukhona lapha: Ikhaya Uthando futhi Ubulili
French Provence kanye lomshado: uhambo kancane umkhaya abasha
Zothando uhambo lamasimu e-lavender, kolwandle azure kanye okumnandi iwayini French, konke lokhu umshado isitayela Provence. ngokuhlanganisa nendwangu, Iphalethi ezithambile, ekhaya impahla Antique nokuthula kwengqondo, Provence ngeke shí ezweni romance nokuzwana. Isimo sengqondo isitayela French kunikeza ukuxhumana yayo nge isitayela rustic, Rustico, lapho njengoba play mnene imibala ngokuqondile … Continue reading French Provence kanye lomshado: uhambo kancane umkhaya abasha →
okuningi: French Provence kanye lomshado: uhambo kancane umkhaya abasha
isigaba: Uthando futhi Ubulili
Beautiful Lingerie ngoba usayizi plus abesifazane: yini okumelwe siyibheke lapho ekhetha?
Underwear - isisekelo esibalulekile ukuze kwakhiwe isithombe. Uma lesi sihloko zokugqoka akhethiwe ayilungile, ke kungonakalisa ngokuphelele ukubukeka. Ngu ukukhethwa kwezingubo zangaphansi ladies omangalisayo kufanele aphathwe ngokucophelela, ngoba afakwe kahle nezinto ezinhle kuzokunika ukuzethemba. Ungethuki, ukukhumbula Bridzhit Dzhons knickers. ngokuqinisekile, thong - lokhu akulona … Continue reading Beautiful Lingerie ngoba usayizi plus abesifazane: yini okumelwe siyibheke lapho ekhetha? →
okuningi: Beautiful Lingerie ngoba usayizi plus abesifazane: yini okumelwe siyibheke lapho ekhetha?
Zibhekise ukulala ndawonye
umusi, ophilayo nesokulala ndawonye, Beveza imizwa yabo hhayi kuphela izimbali, izipho okuphelelisa, kodwa ngisho nalabo, balala. ososayensi baye bazibonakalisa, lolo limi umzimba obucacile, ikakhulukazi ngesikhathi sokulala, Lapho unembeza wethu ivaliwe futhi engena amandla phezu enganakile.
Imibhangqwana ufuna thinta sazana, ngisho emaphusheni, uma umbhangqwana uthatha isikhundla khulula, abathandi sisanamathela izandla nomunye noma izinyawo. Njengoba omunye umuntu ubonakala embhedeni wethu, avele ukuma ukulala ndawonye, abangakwazi usitshele, ngendlela esakheke ngayo nezifiso zethu.
okuningi: Zibhekise ukulala ndawonye
Kanjani ukuba bafundise umyeni izimpondo wakhe
Isengezo cuckold – Kusho ukucasula nodumo indoda, enenkosikazi ukuyenga, kanjalo, ukumedelela noma nijabhise kuye. Le nkulumo ibizwa kwamanye amazwe aseYurophu eyaziwa. Kunezinhlobo ezine izinguqulo imvelaphi yakhe:
okuningi: Kanjani ukuba bafundise umyeni izimpondo wakhe